Momba anay - Henting Chengda Machinary Co., Ltd.
Aamin'ny Paper Cup Equipment Industry Leading Brand
Haining Chengda Machinary Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny taona 1998. Tao anatin'ny 20 taona lasa, Chengda dia mpamokatra manokana amin'ny famokarana fitaovana kaopy taratasy. Ny vokatra dia manarona ny kaopy taratasy mandeha ho azy, vilia baolina, sarom-baravarana ary fantsom-pamokarana fantsom-bozaka sy milina fanaraha-maso.
Miaraka amin'ny departemanta R&D azy manokana, Chengda dia manana teknolojia mitarika amin'ny milina vokatra taratasy. Fanatsarana tsy tapaka, hevitra vaovao ary fitaovana maoderina izay mitondra ny masinina Chengda amin'ny kalitao miavaka manerantany. Sampana R&D matihanina, ekipa mpivarotra ary ekipa aorian'ny varotra, manolotra serivisy serivisy iray manontolo izy ireo.
Miorina amin'ny traikefa 20 taona lasa izay, Chengda dia malaza tsy any Shina ihany, fa koa manerantany. Ny masininay dia nanondrana any Etazonia, EU, Japon, afovoany atsinanana sy Afrika, firenena 100 mahery.
Izahay manitrikitrika ihany
Ny vokatrao dia manana kalitao sy trosa tsara ahafahanay manangana biraon'ny sampana sy mpaninjara maro any ivelan'i Sina